Nagu saabsan - Shenzhen Polymer Battery CO., LTD
Sida soo saare xirfadle ah waxaa jira ku dhowaad 30 injineero oo ka tirsan kooxda PLM R & D oo ay ku jiraan 5 PHD, 10 MFD iyo 15 Bachelors. Qiyaastii 30 unug oo ah qalabka wax soo saarka otomaatiga ah, 25 nubit Qalabka Semi-otomaatiga ah iyo 8 khadadka wax soo saarka ee warshaddeena.
PLM, waxaan nafteena u hibeynay inaan u soo bandhigno macaamiisha alaabooyin tayo sare leh, sidoo kale adeeg mas'uul ah oo qanacsan ka dib iibinta, cabasho kasta ayaa laga jawaabi doonaa
24 saacadood gudahood oo la tirtiray nidaamka hoos ku qoran: dib-u-eegis, falanqayn, soo-uruurin iyo soo-qaadis warbixin 8D ah, sii wadidda tayadayaga aan kula kulanno heerka macaamiisha is-qancinta.
Shenzhen Polymer Battery CO., LTD waxaa la aasaasay sanadkii 2014, waa xirfadle hogaamiya soo saare batari lithium ion leh in ka badan 5years taariikhda Shiinaha. Waxyaabaha ugu waa weyni waa batariga polymer-ka, 18650 baakad baakad ah, batari elektaroonig ah, xirmooyinka batariyada lithium ama mashruucyada batteriga ee loo habeeyay. Waxaan ku siin karnaa xalka hal-talaabo ah iyo badeecada taxanaha oo dhan laga bilaabo baytariyada illaa qaybaha batteriga sida shuruudaha macaamiisha.
Waxaan nahay xirfadle soo saaraha baytariga lithium-ion. Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah alaabtayada, waad nala soo xiriiri kartaa emaylka hoose ama midig ee websaydhka. Waxaan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood!